vehivavytsara | vehivavytsara
Activités JFTAP : le bilan à Allada, Ouèssè et Covè
Posted by vehivavytsara
Par Ablawa BOKO :
Suite à la formation « Jeune Fille, Tu As du Prix » (JFTAP) de mars 2018, plusieurs animateurs ont entamé la restitution dans leur communauté. Retour sur les activités menées dans les communes d’Allada avec Eliane AGONDJA, de Ouèssè avec Basile ALLOHOU et de Covè avec Emmanuel DOSSOU-HOUEGBE.
A Allada,environ 40 jeunes filles ont reçu la formation
Elles étaient une quarantaine âgées de 11 à 19 ans à être encadrées par l’animatrice Éliane AGONDJA dans la commune d’Allada (50 km environ de Cotonou). Elles ont suivi trois sessions sur les cinq que compose la formation. A la fin, elles ont compris leur valeur aux yeux de Dieu, l’attitude à adopter face aux paroles dévalorisantes et l’importance de se garder saine jusqu’au mariage. Ces jeunes filles ont beaucoup apprécié les thèmes abordés et se sont exprimées avec aisance. L’animatrice aussi a fini ces activités…
Première formation « Jeune Fille, Tu As du Prix » : « Ce que je suis venue suivre m’a fait beaucoup de bien !»
1ère édition de la formation « Jeune Fille, Tu As du Prix »
La première édition de la formation « Jeune Fille, Tu As du Prix » s’est déroulée les 22 et 23 mars derniers à Cotonou. Pendant deux jours, les 24 participants se sont plongés dans l’univers des jeunes filles afin de mieux les connaitre et de découvrir des outils pour mieux les accompagner.
« Jeune Fille, Tu As du Prix » (JFTAP) est une nouvelle formation conçue dans un partenariat JAFE/EFF Bénin à l’endroit des jeunes filles à partir de 10 ans. Son seul objectif : les aider à connaitre la valeur qu’elles ont aux yeux de DIEU leur père et à vivre selon cette valeur.
A travers 05 sessions, cette formation amène les animateurs à aborder divers sujets avec leurs groupes de jeunes filles. Ils étaient 24 à participer à la…
How To Be A Confident Christian Woman — Cord of 6
Do you want to be confident in who God made you to be? Do feelings of insecurity hold you back from moving forward with something God has put on your heart to pursue? But blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence is in him. Jeremiah 17:7 Last week I wrote,…
via How To Be A Confident Christian Woman — Cord of 6
Posted in Free kindle Book
Ahoana no mamela ny firaisana ara-nofo mpanararaotra?Amin’ny alalan’ny fanoratana taratasy
Nadika malalaka avy amin’ny Mary de Muth
Izany dia midika hoe efa amby efa-polo taona ireo mpihetraketraka ankizilahy nangalatra ny tena, ny saina, ary potika sy rava tapa-ny fanahiko . Nametraka ho liana izy ireo mpiara-monina, vonona ny hanampy ny mpitaiza fahiny. Te-handray ahy izy ireo eny ny tànany, mampihena ny enta-mavesatra. Inona no hafahafa raha nahafantatra ahy ianao dia miverina. Dia tsy vitsivitsy. Efa nianatra ny fahaizana hoe tsy hita maso aho. Ary raha tsy izay nanenika ny tenako irery, dia nahita fomba mba hampifaly ny olona. Izaho dia zazavavy kely tsara sady tsy manan-tsiny.
Nisy namana zazalahy (rahalahy, Skoty) nitondra ahy ho any an-ala. Ary nasainy namana mba mifandimby. Izy ireo koa nandika ahy ambanin’ny hazo. Ary nitondra ahy an-trano niaraka taminy, nangalatra bebe kokoa amin’ny ambony fandriana fandriana, ny lamba nipetraka teo ambony ny ambany ambony farafara mba hahafahan’izy ireo manao izany “manokana hoe” rehetra raha mbola ny Jona Cleaver Neny hummed Pop feon-kira, ary nanao mofomamy roa efitra izy. Dia nanontany tena izy raha fantany.
Afa-nandositra ny tanan’ny amin’ny matory tolakandro rehetra ho any amin’ny tany am-boalohany hariva aho. Ary tatỳ aoriana, dia nifindra lavitra, lavitra. Fa ny mifono nijanona niaraka tamiko. Tsapako maloto, nandika, tokoa irery niaraka tamin’ny tantara miafina. Niafina tao amin’ny maizina zorony aho. Ny tantara dia tsy nipoitra mandra-nihaonako tamin’i Jesosy. Ary avy eo dia tafaporitsaka, dia nigororoana avy anyanatiko ny tebiteby.
Ahoana no mamela izany?
Rehefa nihaona tamin’i Jesosy, dia nianatra aho fa Izy dia namela ahy.Mitombo ao ny firaisana ara-nofo nandrara kolontsaina tahaka izany, miaraka amin’ny ray amin’ny firaisana ara-nofo fiankinan-doha , dia niady tamin’ny sary vetaveta toy ny zatovo. Izany tena miavaka sy mahamenatra ny hanoratra azy eto, nefa mbola ao, ratsy tarehy. Niady mafy aho mba mino fa efa voavela heloka noho ny mamaky ireo boky, ireo gazety.
Safidiko ny hamela ny helok’ ireo ankizilahy tsy nitranga nandritra ny alina. Raha ny marina, dia misy mbola sombitsombiny amin’ny tsy famelana velona tao am-poko, manaporofo an’izany ny marary ny vavoniko fahatsapana ao amin’izao fotoana izao. Satria raha nifankafantatra taminy ankizilahy toy izany izao izay sahy mikasika ny ankizivavy, ny eritreritra voalohany dia ny namono olona.
Hoy anefa i Jesosy na dia mieritreritra mamono olona isika, dia ny ota.
Zavatra maro no mila avela heloka. Ahoana anefa no mamela ny ankizilahy izay nanao tsinotsinona anao?
Ianao no manomboka famelana amin’ny fanaovana safidy hamela heloka. Ianao foana mandeha ny ifotony, dia ny famelan-keloka tanteraka.
Androany aho mandray dingana iray hafa amin’ny famelan-keloka. Eto, izao ankehitriny izao, izany bilaogy, aho manoratra taratasy ho an’ireo ankizilahy izay voalohany anarana tsy afaka tsaroako, fa izay anarana efa nahamaro ahy, ny Google ny mitady avy ao aminy, manontany tena, manontany tena, manontany tena hoe ny zavatra nataony ankehitriny. Mety ho ny mpampianatra izay efa nandini-tena na mety ny fitondran-tena na tsia ? Mety ho ny olona anadahiny mpiray trano aminy ? Mety ho ny Mpisolo vava?
Tsy fantatro hoe iza ireo olona ireo amin’izao fotoana izao. Nefa, noho ny zava-miafina lehibe, raha mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay tafintohina manerana ity bilaogy ity, ity ny taratasy ho azy ireo.
Ry zazalahy sy ny Anarana izay iantsoana azy
Ny ao anatiko ao,
Mbola tezitra aho.
Ny zavatra nataonao. Oh, izay nataony. Ny safidy nihady manjary donto koa ny haben’ny alahelo ao amin’ny fanahiko.Nangalatra ahy ianao. Ny tsy fananan-tsiny. Ny matoky.Ny mahery fo fomba fijery ny fiainana. Ny herim-pony. Rehetra nalaina an-keriny. Taorian’ny ny fanararaotana ara-nofo, menatra tanteraka aho.Nino izany lainga izany ny tenako.
Tsy mendrika ny ho arovana.
Ny tena mendrika = ny firaisana ara-nofo, fa ao indrindra diso lalana.
Moa izany zavatra izany raha mbola afa-po ny fanirian-tena ratsy? Moa ve ianao mahatsapa te handrava ny akanin-jaza zazavavy kely amin’ny ny fiainany? Nanana anao tsy menatra mandika ny dimy taona, ankizivavy noho ny fahafinaretana? Ianao efa be herim-pony amin’ny fahotanareo, nanao tsinotsinoa ahy. Tsy misy tahotra.Kanefa, ny zavatra atao ihany hiezaka aho natahotra indrindra teo amin’ny fiainako, nijery foana ny manodidina zorony, mihazakazaka, mandeha, mihazakazaka matahotra ny fototr’izany no hihazona ahy.
Nanamarika ahy ianao . Hatramin’ny ny mandika asa, ny marika eo amin’ny handriny nandihy ho an’ny rehetra mpampijaly sy mandika ny mahita, toy ny hoe izy ireo mainty hazavana, sy ny marika fluorescent. Tena tapakila ho an’ny fanampiny biby.
Mbola tezitra aho. Satria rehefa nijery ny zanako vavy dimy taona miverina, dia afaka zara raha miaina. Tahotra toy izany. Toy izany alahelo.Te-hanao dia hiarovana ny ankizivavy rehetra aho.
Tena kely aho rehefa nitondra ahy ho any an-ala. Dia tsy mahavita ny mandositra. Ary raha efa nanandrana, ny masaka tao an-tsaiko ny teny hoe : “Hamono ny ray aman-dreninao izahay, raha milaza na iza na iza.” Nofihiniko mafy ny vavako mba hiarovana ny ray aman-dreny Ary tsy sahy mihazakazaka.
Fa raha mijanona nitoby tany amin’ny tany famaliana fifaliako dia emaciate. (Tsindrio ny hibitsika izany) . Ho efa nahazo ny fandresena.
Hitanareo, dia nihaona i Jesosy fony aho dimy ambin’ny folo taona, folo taona taorian’ny ianao manahy ny helo avy amiko, dimy taona taorian’ny dia maty ny raiko. Malemy fanahy fotsiny i Jesosy Nahita ahy ara-potoana. Ireo famonoan-tena fotsiny no hevitra efa hypercharged ny saiko. Nanontany tena aho hoe inona eo amin’izao tontolo izao aho no manao eto an-maitso, lava-treed maitso eto an-tany. Nisy ny tanjona mba ho mandika? To ampiasaina amin’ny olon-kafa toy ny anao roa? Sa Manana tanjona hafa tsy fantatra.
Evergreen ambanin’ny hazo, ny fahatsiarovana ny fanitsakitsahana nanindrona ny masoko. Ary mbola tsy feno, tao amin’io toerana masina, dia nihaona tamin’i Jesosy. Noraisiny ny fahotako (Oh maro fahotana, tsy tambo isaina ireo / moa izy ireo) ka Natsipy azy atsinanana ao amin’ny projectile iray an’arivony tapitrisa kilaometatra miala amiko. Dia nanadio ahy, nikosoka ny Nanaintaina fo, ary nanomboka nidina ny mampahory ahy / tsara tarehy lalana ny fanasitranana. Dia naka ny ny ota sy ny fanaintainako.
Izy nanova ahy mba ho fanambaràna Azy.
Nisy nanao herisetra aho. Tonga mpitaiza ahy Andriamanitra.
Nangalarina aho. Nomeny ahy mandrakizay ny fifaliana sy ny fiainana be dia be.
Latsaka aho. Ny Tompo manana hevitra manokana ho ahy.
Afaka aho mba hamela ny anareo. Izaho afaka ny hijery anao amin’ny masom-pahasoavana. Nositranin’ny Andriamanitra Masina aho. Sitrana aho. Aleloia!
Takatro kokoa izao. Misaotra an’Andriamanitra aho fa ny fotoana no tonga ny taona, dia nihaona tamin’i Jesosy. Azoko efa nisy anao.Azoko efa nomena ny ratsy Mampirisika ao anatiny, niampita mpanapaka ny be ny sakana, dia tsy voavonjy aho. Raha tsy nisy i Jesosy, Mihoron-koditra aho mieritreritra ny zavatra efa tonga aho. Izay mitondra ahy ho any amin’ny toerana marefo, ary ny lalina, alahelo lalina ho anareo.
Raha milalao antontan’isa avy, tsy manitsakitsaka ahy ho kicks. Ianao nanao zavatra efa natao taminao. Ianao Nanahaka ny fiainana nanananao. Ianao nanao zavatra tao amin’ny tena zavatra izay Nandrotidrotika anareo. Ny zavatra halanao ianao no lasa. Dia tonga ny andro rehefa nanao safidy mba hanome an-lasa adala eo amin’ny lohanao, izay nino mendrika fahafaham-po anao. Nisy nangalatra aminareo, ka mety koa mangalatra avy amin’ny olon-kafa.
Izaho nahita an’i Jesosy, mitanjaka teo amin’ny hazo fijaliana amin’ny niasa miaina. Izy no mahafantatra ny mora ny fitanjahana. Tamin’io hazo fijaliana Izy dia afaka efa nohomboana tamin’ny hazo fijaliana ny mandika rehetra, ireo rehetra izay naniraka Azy teo, saingy dia nanisy fofonaina bibidia famelan-keloka. Nifidy ny hanao izay tsy. Nijaly ho an’ny olona iray ny ota hafa. Ary raha tokony mamoaka famaliana, dia hampidirina ao amin’ny vanim-potoana ny fahasoavana.
Iriko ho anareo Jesosy.
Manahy ny momba anao aho. Angamba ianao nifanizina ny fahatsiarovana ny fiaraha-monina kely akaikin’ny rano masira. Angamba ianao efa nanadio ireo ala avy amin’ny an-tsainao. Manatsofoka izany ianao lalana, lalana midina. Fahatsapana ho meloka saro-pantarina aminareo Aho, nefa tsy afaka hanazavana ny antony.Porofo aho, tsara tarehy porofo, fa afaka ho afaka . Afaka ny ho nanadio madio. Afaka ho voavela heloka.
Fa ianareo tsy afaka manasitrana amin’ny fahanginana. Ny tantara tsy hay lazaina tsy manasitrana. (Tsindrio ny hibitsika izany) . I fanamby anareo, tahaka ny manako-pery-kneed ankizivavy ianao herisetra ara-nofo, mba hanome azy. Lazao ny tantara. Angataho i Jesosy mba hamela anao.
Rehetra azoko atao dia ny mivavaka hahita ity taratasy ity amin’ny alalan’ny tsara tarehy ny sasany Andriamanitra-olo-miaina Serendipity ary farany te-ho afaka amin’ny zavatra nataony tamiko. Izaho hamela anareo roa, ianareo rahalahy ao amin’ny heloka bevava. Ianareo ry rahalahy izay rava herintaona ny natahotra sy ny fiainana hisy holatra. Ianareo ry rahalahy izay azo inoana indrindra dia voahitsakitsaka koa. Andeha isika ho any amin’ny loharano ny famelan-keloka, notokanana Jesosy. Aoka ny teniko ho toy ny lalantsaran’ny:
Mamela anao aho.
Ny tendrombohitro-keloka amin’ny Andriamanitra masina dwarfs ny molehills no navoaka hamely ahy. I namaky ny tenin’i Jesosy momba ilay mpanompo tsy mamindra fo, ka mahafantara: “Ary ny tompony niantso ny mpanompo tao. ‘Ianareo mpanompo ratsy fanahy’, hoy izy, ‘dia foanana ilay trosa rehetra ny anao, satria nifona tamiko ianao mba.Tokony tsy efa nanana famindram-po tamin’ny mpanompo namanao tahaka ny namindrako teo aminao? ‘ (Matio 18: 32-33).
Raha tena, tena mino ny mitanjaka Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana izay nitondra rehetra ny henatra sy ny fahotana sy muck, dia tsy maintsy mino ny sorona Ampy ho anao koa. Ny famindram-pony lalina Miteraka famindram-po ao amiko ho anareo.
Tena hafahafa io fitiavana, ache ity ho anareo aho roa. I maniry hahita anareo afaka amin’ny fahatsiarovana ireo, avy amin’ny fanararaotana ianao sy ny fanararaotana namoaka anareo miatrika. Tsy afaka manolotra vahaolana feno hafetsena na vola nandritra ny taona maro ny fitsaboana mba hamongorana ny fanaintainana. Rehetra dia tsara tarehy aho Jesosy. Rehetra aho dia ny aiko sitrana. Rehetra no Manana fijoroana ho vavolombelona. Rehetra aho dia izao: Izaho no OK. Wildly aho tian’ny ny Mpamorona. Sitrana aho. Aho miaina ny fiainana ny tena tsy azo fifaliana.
Tezitra aho. Fa ny fahatezerany ny fihodinana rehefa mahatsapa fafitaovam-piadiana lehibe indrindra Satana dia fanitsakitsahana firaisana ara-nofo. Tezitra aho ny herin ‘ny haizina izay handrehitra lalina, mahatsiravina, mampatahotra fanahy ratra amin’ny alalan’ny boky sy sary vetaveta, firaisana ara-nofo fanondranana, fanararaotana ara-nofo, ary ny fiankinan-doha ara-nofo. Fisaka avy aho fahatezerana-feno satria efa nahavita halatra, famonoana sy nandringana maro fiainany.
Izany dia tsy maintsy mijanona. Noho ny amiko. Noho ny aminareo. Fa ny amiko.
I Satana, dia afaka tsy manana izany ankizilahy ankehitriny ny olona niova. Satana, ianao dia tsy mahazo fandresena amin’ity kianja filalaovana. Jesosy trumps ny ratsy nataonao. Izay gleefully nitehaka ao amin’ny maizina, i Jesosy manasitrana audaciously eo amin’ny mazava. (Tsindrio ny hibitsika). Tsy afaka, ary tsy handresy. Light foana, foana, foana manosika avy ny maizina.Mandrakariva. Ny andro isaina, sy ireo izay manaraka an’i Jesoa ny marary ho faty ny ara-nofo tetika amin’ny olombelona.
Isika hijoro amin ‘ny fanasitranana. Mijoro ao amin’ny Jesosy isika ‘hery noho ny ho avy tanteraka voavonjy fiainany. Isika izay mahalala fanavotana reraka ny miring-tena ao amin’ny maharary taloha. Kosa no hitsangana. Ho nandihy. Homenay sitrana ny fiainantsika mba hamonjena fanahy sy ny maizina. (Tsindrio ny hibitsika) . Inona Satana natao (ary na dia ianao, ry rahalahy) natao ho ratsy, Andriamanitra masina manao nanova ny fiainako. Isika izay nila famonjena mafy ireo mpiasa ankehitriny ny famonjena, ny fampihavanana, ny famelan-keloka.
Enga anie ka hiaina izany vaovao, fiainana vaovao i Jesosy manome anareo, ry rahalahy ‘ny farany anarana. Manasa anao an-dalana. Ary raha mbola hihaona eo ambanin’ny evergreens, noho ny fiainany-manova fahasoavana, dia mamihina anao. Dia hivavaka ho anareo. No hitomaniako. Izaho hanao hoe famelan-keloka teny. Dia miarahaba anareo tonga soa ny fianakaviana ny mahafantatra ny korontana-mbola-voavotra.
Nijanona teo an-be voninahitra, mamy fahazavan’ny Jesosy,
Mary, intsony dimy, tanteraka tia
Sal Raha mamaky izany, ary ianao koa manana ny tantara toy ny rahalahy, aoka ity hafatra ity seep lalina ao am-ponao. Dia Andriamanitra Izay manome anareo nahantona nitanjaka ny lalan-kivoahana. Ny hisy holatra tanana dia tànan’i ny fandresena sy ny famelan-keloka sy ny hazavana. Hanitatra ny tananao ho Azy. Izay stoops teto an-tany dia manolo-tanana anao.
PPS Raha mamaky izany ary ianao no zaza ambanin’ny evergreens,Manorata taratasy. Tamin’ny fotoana izany, dia afaka milaza catharsis mitahy, ary ny maha mpihavana amin’i Jesosy Nipoaka ny.
Posted in Fanasitranana
Tagged Mary De Muth
Fiainana taorian’ny fahafahan-jaza
Nadika malalaka avy amin’ny MOPS
EMILY WIERANGA MARCH 20, 2016 AMIM-PAHATSORANA
“Ny fitepon’ny fo dia mafy – Mamono 166 isa-minitra,” Nilaza tamiko ny teknisianina herinandro lasa izay tao amin’ny manga Mangina ny fitarafana efitrano.
“, Dia izay tsara?” Hoy aho.
“Oh Eny, izany no tena tsara – tena mahery.”
Nilaza tamiko izy avy eo hihazona aina akory aho, ary nataoko, ary avy eo dia navoaka araka izay nilalao indray ny feo fotsiny dia nihazona izany andraikitra izany ao – ny tsara tarehy “ba-Boom, ba-Boom” ny fiainana, ny ranon andalana sketched manerana ny lamba fanakonana, ary ny zazakely ny fitaovam-piadiana sy ny tongony mandaka toy ny tapa-kazo kely eo amin’ny voanjo.
Ny zaza roa santimetatra – iray santimetatra mahery kely, amin’ny sivy herinandro, roa andro monja. Noho March 14, 2015.
“Izany dia midika hoe napetraka tanteraka – izany nahazo toerana tsara tarehy ao amin’ny tranon-jaza. Izany tena ahazoana aina, “hoy izy, mitsiky ahy, satria fantany izany ny fahadimy bevohoka afa-tsy ny fahatelo hanaovana azy lavitra izany.
Ary farany dia aoka mitsiky indray aho.
Ny zaza dia aina.
Ny vatana dia manao an-trano noho izany kely, ary ny insides nanalefaka ny fanahiko. Ary indray mipi-maso dia nahatsapa toy ny taon-dasa sy tapany ny miezaka ny, ary avy eo ary ny mamorona sy miscarrying ary avy eo nidonam-pahoriana sy ny fiezahana indray – miezaka ny hitoe-jaza efa ho 12 volana – izany rehetra mendrika ny natao izany.
Satria rehefa very ny roa zazakely, no ianaranao – na dia rehefa maka folic asidra sy mikarakara mialoha pilina sy ny progesterone mba hiarovana ny torontoronina – mianatra ihany koa mba hiarovana ny fonao.
Trent nipetraka tamiko teo am-pandriana tao amin’ny efitra manjavozavo jiro – ny zaza mandihy eo amin’ny efijery. Ary nijery ny sy ny rantsan-nilalao tamin’ny ahy. Ary izany no tsy mahatsiaro ho toy zazakely iray hafa – izay velona sy mahazo aina sy mitombo tsara. Ary nahatsapa tahaka an’Andriamanitra ka nanao hoe: “Jereo ny fomba mitandrina ny teny fikasana – na dia mijery hafa noho ianao andrasana.”
Ny taon-dasa no fisedrana ny finoantsika.
Nahazo bevohoka izahay tamin’ny volana Aprily, ary tsy fantatro aho indray alina bevohoka hatramin’ny nahatsapa mafy aho, “Aza misotro intsony,” satria nanana aho divay iray vera izany hariva. “Bevohoka ianao,” fantatro tao am-poko, ary nony ampitso dia nalaiko ny fitsapana, ary aho.
Trent ary izaho no deliriously faly ny roa volana, satria herintaona aloha izahay Te samy nanana ny fahitana ny ankizy iray hafa fidirana ny fianakavianay. Hatramin’ny fotoana izay isika Te faly miaraka amin’ny roa lahy (sy roa Foster zazalahy tamin’ny fotoana nanao azy ho feno trano).
Ary avy eo, ny rà. Ary ny cramping sy ny clots sy ny fipetrahan’ny tena mbola niezaka ny tsy nifindra fotsiny Raha somary atao intsony ny faty. Ary ny andro, ahy nandre Andriamanitra milaza fa ny zaza ho velona – amin’izany kely feo, ary izahay, mino, mandra-aho tany amin’ny hopitaly sy ny amin’ny sac efitrano nitsofoka mangingina tao an-kabine.
Ary rehefa nivoaka ny mpitsabo mpanampy mihazona ny amin’ny sac ny zaza, Andriamanitra nanjavona. Nisy tselatra ny mazava, ka dia lasa izy.
Ny finoanao no efa nahatsapa na oviana na oviana intsony bebe kokoa toy ny fivarotana, nandray ny rehetra, dia “for rent” famantarana eo amin’ny varavarankely.
Tamin’io andro io tao amin’ny efitrano fitarafana, ny voanjo swishing manerana ny lamba fanakonana ho an’ny thump, thump, thump ny fiainana – toy ny soavaly galloping – dia nahatsapa ny teny fikasana ny amin’ny fiainana wrapping manodidina ahy.
Mety tsy misy dikany izao ankehitriny izao.
Ny finoanao dia mety hahatsapa toy ny nandao trano.
Fa Andriamanitra tsy hilalao fitaka amintsika. Izy marina teo aminay, mandeha amin’ny alalan’ny rehetra izany amin’ny antsika, Eny, fa Izy no miahy.
Emily T. Wierenga dia nahazo loka mpanao gazety, mpitoraka bilaogy, nirahina mpanakanto sy ny mpanao gazety, ary ny mpanoratra ny boky enina anisan’izany ny vaovao memoir manao azy Home: Mitady Ny Fomba Peace, ny maha sy ny Tanjona (Baker Books, 2015). Dia avy ny boky Emily soa ny tsy maka tombony, ny Lulu Tree . Izy Mipetraka any Alberta, Kanada miaraka amin’ny vadiny sy ny zanany telo. Raha mila fanazavana Info, tsidiho emilywierenga.com . Mahita azy ao amin’ny Twitterna Facebook .
Free ebook for you just for purpose
It is free for limited time
This is free for limited time, http://amzn.to/1Ltlccr
Free e-book destined for 8-12 years old children
It is free for limited time.
O come, O come, Emmanuel (Video)
This song not just prays for the return of Jesus Christ but also pleads for him to save Israel as well. Indeed, God’s will be done. Here are the lyrics: O come, O come, Emmanuel And ransom ca…
Source: O come, O come, Emmanuel (Video)